समुद्रको पानी किन नुनिलो हुन्छ ? कहाँबाट आउँछ त्यति धेरै नुन ? - नागरिक रैबार
समुद्रको पानी किन नुनिलो हुन्छ ? कहाँबाट आउँछ त्यति धेरै नुन ?
काठमाडौं । यो कुरा त हामी सबैलाई थाहै छ कि समुद्र तथा महासागरको पानी नुनिलो हुन्छ । तर सबैलाई थाहा नहुन सक्दछ कि समुद्रको पानी किन नुनिलो हुन्छ ?
समुद्रको पानी यति धेरै नुनिलो हुन्छ कि पिउनका लागि कत्ति पनि उपयोग आउँदैन । आखिर समुद्रमा यति धेरै नुन कहाँबाट आउँदो हो र पानी नुनिलो हुँदो हो ?
वैज्ञानिकहरुका अनुसार पृथ्वीको ७० प्रतिशत भाग पानीले ढाकेको छ । उक्त पानीमध्ये ९७ प्रतिशत महासागर तथा समुद्रहरुमा छ ।
अमेरिकाको नेशनल ओसियानिक एण्ड एटमस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेसनका अनुसार यदि महासागर तथा समुद्रको पानीमा रहेको सबै नुन निकाल्ने हो र जमिनमा ओछ्याउने हो भने त्यसले पृथ्वीको सबै जमिनको भागमा ५ सय मिटर अग्लो नुनको पत्र बन्दछ ।
समुद्रमा नुन आउने दुईवटा स्रोत छन् । सबैभन्दा धेरै नुन नदीहरुबाट आउँदछ । वर्षाको पानी केही मात्रामा अम्लीय हुन्छ । जब त्यो पानी जमिनका चट्टानहरुमा पर्दछ तब त्यसले चट्टानको माथिल्लो पत्रलाई खियाउँदछ । त्यसबाट निस्कने लवणहरु पानीसँगै नदी हुँदै समुद्रमा पुग्दछन् । यो प्रक्रिया लाखौँ करोडौँ वर्षदेखि चल्दै आएको छ ।
त्यस्तै समुद्रमा नुन आउने अर्को स्रोत पनि छ । त्यो भनेको समुद्रको पिँधमा रहेका छिद्रहरुबाट आउने भूतापीय द्रव्य हो । समुद्रको पिँधमा रहेका चिराहरुबाट समुद्रको पानी भित्र छिर्दछ र त्यो पृथ्वीको केन्द्रसम्म पुग्दछ । त्यहाँ रहेको म्याग्माका कारण भित्र छिरेको पानी तात्दछ । तापका कारण त्यहाँ श्रृंखलाबद्ध रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ । रासायनिक प्रतिक्रिया सँगै पानीले अक्सिजनको अणुसँगै म्याग्नेसियम र सल्फेट समेत छाड्दछ र म्याग्मामा रहेका फलाम, जस्ता र तामाजस्ता धातु ग्रहण गर्दछ । त्यसपछि धातुयुक्त उक्त तातो तरल पदार्थ पृथ्वीको केन्द्रबाट समुद्रमा निस्किन्छ र समुद्रको पानीसँगै मिसिन्छ ।
समुद्रको पिँधमा हुने विभिन्न खाले ज्वालामुखी विस्फोटका क्रममा पनि ठूलो परिमाणमा लवणहरु पृथ्वीको केन्द्रबाट बाहिर निस्किन्छ र समुद्रको पानीमा मिल्दछन् । यी सबै कारणले गर्दा समुद्रको पानी नुनिलो हुन्छ ।
समुद्रको पानीलाई नुनिलो बनाउने आयनहरुमा क्लोराइड र सोडियम मुख्य हुन्, जसले ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दछन् । अरु १० प्रतिशत हिस्सा म्याग्नेसियम र सल्फेटले ओगटेका हुन्छन् भने बाँकी ५ प्रतिशत अन्य विभिन्न आयनहरु रहन्छन् ।
एक यस्तो समस्या, जसले बालबच्चामा पढ्न, लेख्न र बुझ्नमा गाह्रो हुन्छ
प्रदेश १ मा दश हजार नाघे संक्रमित, एक सय नाघ्यो मृतकको संख्या
काठमाडौं । कहिलेकाहीँ मानिसको तालुमा आलु फल्दछ र एकै झट्कामा मान्छे रोडबाट करोडमा पुग्दछ । ताइवानमा एकजना व्यक्तिको जीवनमा यस्तै चमत्कार भएको छ । एक सुनसान टापुमा घुम्दै गरेका ती व्यक्तिले गोबरजस्तो कडा र सुख्खा चिज फेला पारे । उक्त वस्तुबाट अनौठो खालको सुगन्ध आइरहेको थियो । सोही सुगन्धले उनको ध्यानाकर्षण गर्यो र कौतुहलता जगायो […]
एकै पटक पाँच शिशुको जन्म
तपाईँ हामीले एक महिलाले तीन वा चारसम्म शिशु जन्माएको समाचार सुन्दै र देख्दै आएका थियौँ । सोमबार थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नुवाकोटकी २८ वर्षीया सोमिका तामाङले तीन र चार नभई एकै साथ पाँच शिशु जन्माएकी हुन् । उनले आज अस्पतालमा शल्यक्रियामार्फत पाँच शिशुलाई जन्माउनुभएको अस्पतालका निर्देशक डा सङ्गीताकौशल मिश्रले जानकारी दिइन् । तीमध्ये […]
छोटा कपडा लगाउनेलाई कारवाहीको तयारी !
काठमाडौं । दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक कम्बोडियाले एउटा यस्तो कडा कानून ल्याउँदैछ जसमा छोटा कपडा लगाउने महिलाहरुलाई कारवाही गरिनेछ । १८ वर्षकी मोलिका ट्यानले जब पहिलोपटक सरकारले उक्त कानूनको मस्यौदा तयारी गरिरहेको बारेमा सुनिन् तब उनी यति चिन्तित भइन् कि त्यसविरुद्धमा एक अनलाइन अपिल नै सुरु गरिन् । विज्ञापन प्रस्ताविक कानून अनुसार कम्बोडियाली महिलाहरुलाई ‘उत्तेजक […]
८१ हजार डलरमा बिक्यो अब्राहम लिंकनको कपाल
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको कपालको टुक्रा ८१ हजार अमेरिकी डलर (९५ लाख रुपैयाँ)मा बिक्री भएको छ । लिंकनको रगतमा लतपतिएको एक टेलिग्राम पत्रसँगै रहेको उनको कपालको टुक्राको झुप्पो झण्डै ९५ लाख रुपैयाँमा लिलामी भएको हो । सन् १८६५ मा हत्या गरिएका लिंकनको शवको पोष्टमार्टका क्रममा काटेर निकालिएको उक्त कपालको […]
रुखसँग बिहे गरेकी यी महिलाले मनाइन् पहिलो वर्षगाँठ
काठमाडौं । घरमा श्रीमान हुँदाहुँदै जंगलमा गएर रुखसँग बिहे गरेकी एक बेलायती महिलाले आफ्नो रुखसँगको बिहेको वर्षगाँठ मनाएकी छिन् । दुई बच्चाकी आमा रहेकी ती महिलाले पतिलाई घरमै छाडेर जंगलमा गई आफ्नो वृक्षपतिलाई अंकमाल गरी एनिभर्सरी मनाइन् । उनीसँग उनका दुईजना साथी पनि एनिभर्सरी मनाउने कार्यक्रममा पुगेका थिए । उनले आफ्नो रुखपतिलाई एनिभर्सरी उपहारको रुपमा […]
छोराको अन्तै माया बसेपछि ससुराले गरे हुनेवाला बुहारीसँग विवाह
छोराको अन्तै माया बसेका कारण एक ससुराले आफ्नी हुनेवाला बुहारीसँग बिहे गरेका छन्। घटना भारतको हो। बिहारमा ६५ वर्षका रोशन लालले २१ वर्षकी कन्यासँग विवाह गरेका हुन। रोशन लालको छोराको विवाह सपना नामकी कन्यासँग हुनेवाला थियो। जन्ती कन्याको घरको ढोकामा पुगेको थियो तर रोशनको छोरा मण्डपबाट एकाएक भागे। छोरा मण्डपबाट भागेपछि बुवा नै मण्डपमा बस्न […]